Zamioculcas - imbali Afrika ashisayo
Plant namahlamvu okuhlobisa eqoqwe lapho uphuma khona, liye laziwa kusukela 90s kwekhulu lama-20. Native imbali Zamioculcas zamielistny kusuka Afrika, ngakho-ke linamandla nesomiso. Lesi sikhungo singesokuqala linesizotha kakhulu futhi endawni ekhaya. Imbali ogama lakhe behlonipha zamii, njengoba kufana kakhulu ngokubukeka. Zamioculcas kungokwalabo umndeni Araceae. Amahlamvu aso aluhlaza komtshina wakhomba ithiphu. Ngaphansi phansi lesi sitshalo itholakala vodozapasayuschy tuber, ngakho imbali kungokwalabo amaSucculents. Blooms Zamioculcas ubudala kuphela, imbali yazo lesi sijame njengebhoksi Onendlebe lizungezwe umgubuzelo.
Ukuze isitshalo eba kahle, asikho isidingo ukudala izimo ezikhethekile. Nakuba Zamioculcas kufanele njalo olufuthwe ngamanzi. Imbali uthanda ukushisa. Fine, uma uhla ekamelweni lokushisa okufanele inakekelwe phakathi degrees nesishiyagalombili ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha. akesabi of okusalungiswa. Ehlobo lika izitshalo imbiza kudingeke sikhuthazelele on emphemeni noma ensimini aqukethe.
Indlela ibukeka imbali umbukwane Zamioculcas, isithombe show lokhu ngokucacile. Lesi sitshalo bubaluleke ngempela ukubekezela isithwathwa kakhulu ezingeni ukukhanyisa, ke ingaqukatha kokubili ilanga okugcwele egumbini mnyama. Kodwa ngesikhathi esifanayo kusukela imbali ka izimo ngeke linakekelwa kudingeke ukuba ogulayo. Uma isitshalo endlini efudumele futhi ohlangothini okwanele, kubalulekile ukwandisa ivolumu kokuphuza ukuvundiswa. Uma ngakolunye uhlangothi, ngenxa imbali akuyona ukukhanya okwanele, uma ufuna ukunciphisa ukuthambisa, umanyolo ofanelekile futhi izinga lokushisa kufanele kwehliswe.
Uyathanda udlulele, ukukhanya esithambile Zamioculcas. Imbali kufanele ubekwe amafasitela, okuyinto zitholakala entshonalanga noma empumalanga uhlangothi. Lapho lesi sitshalo sivuthuka lapho phuzi futhi ewa, isizathu kufanele itholwe e izifo imbali. Kodwa ngokuvamile inkinga itholakala ukuthambisa okungalungile. Plant angase afe. Amnandi nesomiso nemithi, uma aqukethe akukho manzi, uqala ukusebenzisa izinqolobane zalo, futhi umswakama ngokweqile kuholela impande bola.
Kumele ngobuningi bazithela Zamioculcas imbali uthanda amanzi ezithambile-ixazululwe. Ngesikhathi esifanayo phakathi waterings kuyadingeka ukuze agcine isikhawu emhlabeni ebhodweni bome out kuphela kwesigamu ivolumu. Embizeni ne isitshalo kuyadingeka ukuba agqoke Pallet, okuzokwenza sokukhipha amanzi okweqile. Entwasahlobo nasehlobo imbali bazithela kaningi, bese umswakama umhlabathi ebusika kuyehla kube okungenani, kanye ngenyanga. Amahlamvu zalesi sihlahla kufanele ngezikhathi bahlanza ngendwangu emanzi noma isipanji. Uma imbali ukhula endaweni evulekile, amafutha yemvelo ukuletha amanzi emvula.
Njengoba Umanyolo efanelekayo efaka umquba umdolofiya noma amaSucculents. Ungase futhi ukuthenga Umanyolo jikelele. Isiza ukuthuthukiswa kwesikhathi imbali: entwasahlobo nasehlobo. Lesi sitshalo ayidingi Ukufakelwa njalo. Imbali okusakazwa division noma cuttings.
Ikhaya lingafika ku 1 imitha ukuphakama Zamioculcas, imbali esinika isitshalo engavamile, futhi bahlanganiswe ukwesekwa ngaphambi kokuba izinze. Kungcono uma uyoba isakhiwo annular.
Ikhukhamba meringue: izinzuzo izinhlobo kanye nezaluleko mayelana kulinywe
Dimorfoteka Solar. Ezikhula imbewu
Ukupheka marmalade ekhaya
Nasekwenzeni pestle - izimfanelo edingekayo kwanoma iyiphi ikhishi
Ubuchwepheshe banamuhla sezemfundo: izici
Ihhotela Ushukela Beach Xeno Amahhotela 4 * (Turkey, Alanya): abahambi Izibuyekezo
Lesikhumbuzo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki ukuze Tchaikovsky eMoscow zonke lezi zinganekwane ezisemadolobheni ephathelene nayo
Ibhethri Ukumaka: izici kanye nezimpawu
Impisi Red (intaba): incazelo yohlobo, inombolo. Population ugcine inkinga
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini Sea Ocean: izici eziyinhloko
Stucco udini eyenziwe polyurethane